Wararkii ugu dambeeyey 'Mooshin ka dhan ah' Lafta-gareen oo ka socda Xamar - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey ‘Mooshin ka dhan ah’ Lafta-gareen oo ka socda Xamar
Wararkii ugu dambeeyey ‘Mooshin ka dhan ah’ Lafta-gareen oo ka socda Xamar
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya, isla-markaana laga soo doortay Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay xaaladda maamulkaasi iyo abaabul ka dhan ah Lafta Gareen oo ka socdo Muqdisho.
Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo Baydhabo kula hadlay Wariyeyaasha ayaa shaaca ka qaaday in dad ka mid ah Digil iyo Mirifle ay wadaan qorshe lagu burburinayo maamulka Koonfur Galbeed, isla-markaana lagu beegsanayo Madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen.
Xildhibaankan oo Sodog u ah Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay in xubnahaasi oo ay ku jiraan siyaasiyiin & xildhibaano ay doonayaan in meesha laga saaro Lafta Gareen.
Sidoo kale wuxuu raaciyey “Maamulka Koonfur Galbeed oo jiro waqtigiisii waa dhamaadee ha is casilo meesha haka tago waxaa fiican ninka meesha haddii uu ka tegaayo marka uu waqtigiisa uu dhammeysta lee sidii kii hadda loo tartamay ayaa nidaamku ku fiican yahay”.
Taliyihii hore ee ciidamada Asluubta ayaa xusay inay kasoo horjeedaan qorshahaasi, wuxuuna tilmaamay inay la dagaalami doonaan cidkasta oo wada sharci darro.
“Ninkii rabo ninkan inuu galo oo weeraro waqtigiisa marka uu dhammado ha eryo intii ka horreyso looma dhowaan karo ninkii u yimaadana waa la dagaalameynaa micnuhuna waa saas,” ayuu markale hadalkiisa sii raaciyey xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan Aadan.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo maalmihii u dambeeyey uu guux siyaasadeed oo ka dhan ah maamulka Lafta Gareen uu ka jiray magaalada Muqdisho, kadib markii ay soo dhammaatay doorashada Soomaaliya, taas oo uu Madaxweynaha Koonfur Galbeed qayb ka ahaa, isaga oo taageersanaa Madaxweynihii laga adkaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Lafta Gareen ayaa lagu xasuustaa inuu soo saaray xildhibaano u badan dhalinyaro isaga taabacsan, wuxuuna gebi ahaan meesha ka saaray rugcadaayaashii siyaasiyiinta Koonfur Galbeed, sida Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari), Shariif Xasan iyo Cabdiweli Muudey.